Ihe Mere Ngwa Ngwa Ngwa Ji Dị Iche | Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 30, 2013 Tọzdee, Machị 7, 2013 Douglas Karr
E nwere oge m bụ onye naysayer banyere ngwa mkpanaaka. Echere m na anyị ga-echere ruo mgbe HTML5 na ihe nchọgharị mkpanaka dị ebe a na ngwa ndị ahụ ga-akwụsị ụzọ nke ngwanrọ desktọọpụ. Ma ha enwebeghị.
Nke anyi ngwa mkpanaaka mere site na onye ọrụ ahụmahụ ọkachamara na Postano ebibiwo echiche m ochie. Nke a bụ stats mkpanaka anyị site na Webtrends.
Otu anya na ọnụ ọgụgụ nke ngwa anyị ọ kwesịrị ịgbanwe obi gị. Ọ bụ ezie na anyị nwere ndị ọrụ 272 naanị kemgbe anyị malitere, anyị nwere ihe ngosi 15.3k - nke ahụ bụ 14.1 ngosi ihuenyo maka otu oge! Nke ọ bụla n'ime nnọkọ ndị ahụ dịkarịa ala ọ fọrọ nke nta 6 nkeji! Ọ bụ ezie na ọdịnaya bụ eze, ọ bụghị naanị ọdịnaya nke na-adọta ọtụtụ ndị. Ezubere ngwa ahụ nke ọma - site na njikọta otu na njikọ pọdkastị na vidiyo na mkpịsị aka.
Pụrụ ịhụ site na ọdụ ikpeazụ nke stats na anyị na-adịbeghị anya nyeere pushma Ọkwa. Nke ahụ na-ewepụtakwu oge maka onye ọrụ ọ bụla. Anyị na-arụkwa ọrụ iji meziwanye ọdịnaya ahụ. Anyi aghaghi itinye bọtịnụ egwu na vidiyo (emeela koodu, a naghị etinye ya n'ọrụ) wee nweta ndị na-akwado anyị ụfọdụ kwuru.
Tags: ahịa blog ngwamobile ngwangwa mkpanaakaekwentị mkpanaakamobile ọrụmobile echicheakụkọ, kooduwebụsaịtị
Transcript ọdịyo na vidiyo dị mfe: Speechpad